प्रधानमन्त्री ओली अस्पतालबाट डीस्चार्ज , मुस्कुराउँदै यसरी अस्पतालबाट नीवास गए ( हेर्नुहोस ) – Pradeshi Online
प्रधानमन्त्री ओली अस्पतालबाट डीस्चार्ज , मुस्कुराउँदै यसरी अस्पतालबाट नीवास गए ( हेर्नुहोस )
in Breaking News !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पाँच दिनपछि आज साँझ अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनु भएको छ ।
छातीको संक्रमण, ज्वरो र खोकी नियन्त्रणमा नआएपछि सोमबार विहान त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना हुनु भएका प्रधानमन्त्री ओली आज साँझ डिस्चार्ज हुनु भएको हो ।
विहिवार साँझबाटै उहा पूर्ण रुपमा स्वास्थ्य हुनु भएपनि थप निगरानीका लागि आजसम्म राखेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था चेक गरिरहेका चिकित्सकको केहीबेर अघि बसेको बैठकले उहालाई डिस्चार्ज गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. उत्तमकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार विहिवार साँझबाटै उहा पूर्ण निको भएपनि संक्रमण हुन सक्ने आशंकाका कारण निगरानीमा राख्नु परेको बताउनु भयो ।
डिस्चार्ज भएपछि पनि चिकित्सकहरुले अहिले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन सुझाव दिएका छन् । तत्काल सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भए पुन संक्रमण फैलन सक्ने आशंका हुने उहाको स्वास्थ्य चेकअप गरिरहेका डा. अरुण सायमीले बताउनु भयो ।
‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन भनेका छौं ।’ उहाले अगाडी भन्नुभयो,‘तत्काल सार्वजनिक कार्यक्रममा जानु भयो भने संक्रमण फैलन सक्छ, त्यसैले एक साता अझै निवासमै आराम गर्न भनेका छौं ।’
डिस्चार्ज भएपछि प्रधानमन्त्री ओली शिक्षण अस्पतालबाट सोझै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्नु भएको छ ।
Tags: Nepal KhabarPm kp oliकेपी ओली
Japan Airline’s Pilot Arrested From London Just Before Flight
मलेसियापछि श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टको ध्यान कतारमा केन्द्रित, म्यानपावर कम्पनीहरु बन्द हुने स्थिति